२७ भाद्र २०७७, शनिबार २३:४३
भदौ २८, राजविराज –
सहयोद्धा नामक संस्थाले राजविराज नगरपालिकालाई केन्द्रित गरेर सुरु गरेको ” एक घर एक पिसीआर ” अभियानलाई निरन्तरता दिने क्रममा शनिवार राजविराज नगरपालिका वडा नं. १२ मा पिसीआर परीक्षणको लागि स्वाब संकलन गरेको छ । सामुदाय स्तरमा फैलिएको कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सुरु गरिएको यो अभियान अन्तर्गत वडा नं. ८ मा पहिलो र वडा नं. २ मा दोस्रो चरणको कार्यक्रम गरिएको थियो ।
राजविराज नगरपालिका वडा नं.१२ को वडा कार्यालयको सहयोगमा शनिबार सञ्चालन गरिएको उक्त स्वाब संकलन कार्यक्रम स्वास्थ्य चौकीमा दिउँसो ४ बजेबाट सुरु भएको थियो । एक घरबाट कम्तिमा एक जनाको परिक्षण गर्ने उद्देश्य राखेर संचालित कार्यक्रममा जम्मा ८७ नमुना स्वाब संकलन गरिएको कार्यक्रम संयोजक शिव शाहले बताए ।
कार्यक्रममा स्वाब संकलन गराउन आएका स्थानियहरुले समाजिक दूरी कायम गरी मास्क जस्ता सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाएका थिए । कार्यक्रममा उपस्थित संस्थाका सदस्यहरूले सुरक्षाका उपायहरु अपनाएको संस्थाका अध्यक्ष रवीन्द्र यादवले बताए ।
युवाहरु देशको वास्तविक शक्ति र अमूल्य पुँजी हो । यसमा लगानी लगाउँदा देशले कहिले पनि नोक्सानी खप्नु पर्दैन । यस्तो महामारीको बेला देशका सक्षम युवाहरु आआफ्नो ठाउँबाट आफू सुरक्षित भई समाज र देशका लागि केही गर्ने अठोटका साथ कार्यक्रम गरिएको संस्थाका कार्यकारी सदस्य नितेश दासले बताए । कोरोना महामारीले आक्रान्त भएको बेला सहयोद्धा परिवारले समुदायमा यसको संक्रमण फैलिन नदिन यो अभियानको थालनी गरेका हुन् ।